Sida loo Iibsado Tuubada Jikada Cusub
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Sida loo Iibsado Tuubada Jikada Cusub
2020 / 11 / 16 QoondayntaTilmaamaha qasabada 7847 0
Iibsiga tuubada saxda ah ee jikada waxay kuxirantahay inta badan dhuumaha jira. Doorashada qasabadda cusub ee jikada way fududaan kartaa sidaad moodeysid mar haddii aad tixgeliso saddex faahfaahin oo muhiim ah ka hor intaadan bilaabin dukaameysiga.
Waxaa jira qasnado kala duwan oo jikada iyo naqshadaha weelka la heli karo, laakiin qasab maaha inay is waafaqaan. Ku billow adigoo fiirinaya saxanka jikadaada si aad u nidaamiso inta boos ee fuuliye tuubbo horay loo qoday laga heli karo. Tani waxay khuseysaa haddii aad ku rakibayso qasabad cusub saxanka jira ama aad iibsanayso qasabad cusub iyo tubbo cusub.
Caadi ahaan, qasabadaha jikada waxay leeyihiin hal mawaadi oo wareegaya si toos ah si loo hagaajiyo heerkulka biyaha ama laba gacmood oo lagu qaso biyo kulul iyo qabow. Kuwaas waxaa ka mid ah buufiye dhinac fadhiista ama buufis jiid-jiido ama soo-jiidasho leh oo leh xulashono buufin iyo durdurro.
Hands-free iibso qasabadaha internetka kuna dar weji cusub jikada. Kuwani waxay noqon karaan taabasho ama dhaqdhaqaaq u janjeedhsan waxayna ku jiraan labada temps iyo xakamaynta tirada, taas oo qasabadahaas ka dhigaysa xulasho ammaan u ah guryaha carruurta leh. Qasabadaha gacma-la'aantu waxay si fiican ula shaqeeyaan aragtida naqshadeynta baahsan, taasoo ka dhigeysa meelaha lagu nool yahay kuwo la heli karo oo la jaan qaadi kara heer kasta oo awood jireed ah.
Haddii ay qasabaddaada hadda jirta ay leedahay saxan ay ku rakiban tahay, ka hubi saxanka hoostiisa si aad u fiirsato inta god ee saxanka rakibaya uu daboolayo. Maskaxda ku hay tan xigta ee ku saabsan boosaska sii kordhaya:
Tuubbooyinka jikada waxay yeelan karaan min hal illaa afar godad rakibid ah.
Saddex dalool ayaa loo isticmaalaa dheecaanka iyo laba gacmood.
Daloolka afaraad waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa qalab, sida qalabka saabuunta lagu buufiyo ama buufinta dhinacyada.
Qasabad kasta oo cusub waxay ku tusaysaa baakadaha inta godad rakibid ah ee ay u baahan tahay rakibo.
Haddii aad ku rakibayso qasabad hal-gacan-qabsi ah saxanka saddexda boos leh, saxanka sagxadda ayaa sida caadiga ah dabooli doona fursadaha aan la isticmaalin.
Meesha ay ku yaalliin godadka sii kordhaya ee weelalku waa wax kale oo maskaxda lagu hayo. Badanaa, saxanku wuxuu ku yaal meel u dhow bartamaha saxanka jikada, laakiin tani had iyo jeer maahan xaalad. Haddii qasabadda lagu dhejinayo hal meel oo ka mid ah saxanka jikada, tuubada waa inay ahaato mid dheer oo ay ku gaadho weelka ka soo hor jeeda si loo isticmaalo. Xuub sare oo leh sanka lagu buufiyo ee hoos u soo jiidaya ayaa ah ikhtiyaar kale oo loogu talagalay saxanka jikada oo leh godad sii kordhaya.
Waxaad ka heli doontaa qasabadaha kore iyo kuwa hoose. Tuubbada-dusheeda ayaa isku xidha iyaga oo ka imanaya miisaska dusha sare. Boolal ayaa lagu xirey iyada oo la marinayo tubbada hoose. Qasabadaha hoose-dhajinta waxay ku dhajinayaan kan ugu fiican ee ka-soo-horjeedka. Boolal ayaa lagu rakibay inta ugu fiican qaybta qasabadda.
Hubi Khadadka Biyaha
Hubso in qasabadda cusub ee jikada aad rabto ay la jaan qaadi karto khadadka isha laga helo. U fiirso hoosta saxankaaga hoostiisa qeybta bakhaarka oo xusuusnow sida ay u weyn yihiin taxanaha biyaha la cabbo ee hadda jira iyo aallada xirmooyinka. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo aad ku shaqeyn karto markaad fiirineyso khadadkaaga biyaha la cabbo iyo waalka:
Haddii aadan hubin inta ay le'eg yihiin xariijimahaaga biyaha, ku xalli cajalad wax lagu cabiro.
In kastoo laga yaabo inaad u baahato inaad ugaarsato, cabirka waa inuu ku xirnaadaa waalka.
Ogsoonow in guri duug ah uusan si sax ah u lahaan karin waardiyuhu.
Qaar badan oo qasabadaha cusub ka mid ah 3/8-inch khadad jilicsan oo ku lifaaqan. Haddii walxaha qarxa ee caadiga ah ee caadiga ah ay yihiin 1/2-in. cabir ahaan, waa inaad ka beddalataa furayaasha xirmooyinka 3/8 inji inji kahor intaadan gelin tuubada cusub.
Caadi ahaan waa wax caqli gal ah in la beddelo aaladaha la xiro marka la rakibayo saxan cusub, si kastaba ha noqotee, maaddaama qalabka wax lagu xiro uu dhici karo haddii aad rabto inaad xirto biyaha si ay u daataan ama u dayactir kale u sameeyaan.
Haddii godadka sii kordhaya ee weelasha ee tubbadaada laga heli karo meel u dhow hal dhinac oo ka mid ah saxanka, hubso in qulqulkaagu uu dheer yahay inuu lulmo oo gaaro dhinaca kale ee weelka, gaar ahaan haddii aad leedahay laba waaskadood. Hal xalka ayaa ah inaad iibsato qulqulo dheer oo dheeri ah oo leh sanka xoqan ee jiidaya. Naqshaddani waxay si fiican ugu habboon tahay naqshadda jikada jikada oo leh qaybo daloolo ah.
Xitaa wax sida muuqata u yar sida finalka qalabkaaga tuubooyinka ayaa sameyn kara ama jebin kara bilicsanaanta jikadaada. Waxaa jira tilmaamo badan. Tuubada jikadaadu waa inay u dhigantaa dhamaadka qalabka kale ee weelasha lagu dhaqo, oo ay kujiraan kala duwanaanta hawada weelka weelka lagu dhaqo, qalabka saabuunta lagu dhex dhisay, iyo safafka godka godadka aan la isticmaalin. Tuunbo leh dhammaystiran dusha sare ee dusha sare ee 'chrome dusha' ayaa fiirin doonta meesha haddii dhammaan kuwa kale ee isku dhafan ay leeyihiin dusha sare ee dusha sare ee nikkel, tusaale ahaan.
Hore:: Sida Loogu Soo Xulo Qasabada Musqushaada Next: TILMAANKA Iibsiga ugu wanaagsan ee foosto
2021 / 02 / 04 5685
2021 / 02 / 03 5610
Faallooyinka tubada Musqusha Delta: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta Musqusha
2021 / 02 / 03 4705
Sida loo Nadiifiyo Matte Qasacadaha Madbakha Madoow
2021 / 01 / 28 3492
Sida loo doorto Qasabada Musqusha: Tilmaamaha Iibsiga ee 2021
2021 / 01 / 28 2295
Sida loo Nadiifiyo Qalabka Matxafka Musqusha ee Matta
2021 / 01 / 28 3951